ဘဝမှတ်တိုင်: BACK LIGHT ပျောက်လျှင်
စက်နိုးသော်လည်းရုပ်မပေါ်ဖြေရှင်းနည်း။ credit to ဆရာကိုမောင်နှိူင်
ပုံထည်းမှာပြထားတဲ့အပိုင်းကို ကိုင်ရမှာပါ။supply ကိုတပ်ထားပြီး ပါဝါမနိုးပဲ တိုင်းကြည့်ပါ့မယ်။supply ရဲ့ test ကိုခလုတ်လေးလှည့်ပြီး အနီရောင်လက်တံနဲ့ထောက်ပါ့မယ်။
စက်မနိုးသေးပဲ supply တပ်ထားတဲ့အနေအထားမှာပဲ ကွိုင်ရဲ့တဘက်တချက်နဲ့ဒိုင်အုပ်သင်္ကေတ
လိုင်းပါတဲ့ဘက်ကို 3.3v ရှိနေရပါမည်။ကျွန်တော်တို့စစ်ရမှာ အဲ့ဒိ ပွိုင့် ၃ ပွိုင့်ကိုပဲ စစ်မှာပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ ic ကောင်းခြင်း၊မကောင်းခြင်းကို အဲ့ဒိ ပွိုင့်၃ပွိုင့်နဲ့ စစ်မှာပါ။
အကယ်၍ နံပါတ် ၁ နေရာလေးမှာ volt ပျောက်နေရင်အောက်ကပုံထည်းကကောင်လေးကိုကိုင်ရမှာပါ။
မဟုတ်ပါ။အချက်ပြလမ်းကြောင်းသည်နံပါတ်၁နေရာလေးနှင့်အိုင်စီ၏pin-no-6ကို လည်းတပြိုင်နက်ဝင်ပါသည်။လမ်းကြောင်းတဆက်ထည်းဖြစ်ပါသည်။အိုင်စီ၏အထွက်သည်pin-no-4 ဖြစ်ပါ
သည်။ထို pin no4နှင့်လမ်းကြောင်းတဆက်ထည်းကပုံထည်းကအမှတ် နံပါတ် ၂ ပါ။နံပါတ် ၁ တွင် 3.5 voltရောက်သလိုနံပါတ် ၂ တွင်လည်း ကွိုင်ကောင်းသည်ဆိုလျှင် 3.5 volt ရောက်နေပါမည်။ထို volt မတွေ့ရင်အဲ့ဒိကွိုင်ကိုလဲရပါမည်။
ပါမည်။display လင်းမည်မဟုတ်ပါ။ထိုအချက်ပြခုန်လှိုင်းနှင့်ကွိုင်နံပါတ် ၂ မှ3.5 volt တို့သည် carrier သဘောတရားအရဒိုင်အုတ်၏တဘက်သို့ကူးသည်နှင့်displayတပ်ထားမည်ဆိုပါက နံပါတ် ၃ နေရာတွင်23 volt သို့ပြောင်းသွားပါသည်။back light ic ပျက်နေခြင်း၊display ပျက်ခြင်း၊conector မှကြေးငုတ်လေးများ နိမ့်နေ၍အဆက်အသွယ်မရှိခြင်း၊conector ခဲချက်လွတ်နေခြင်းများဖြစ်နေပါက 3.5 volt အဖြစ်သာတွေ့ရ
နံပါတ် ၃နေရာတွင် ဒိုင်အုတ်ပျက်နေရင်တော့ မည်သည့် volt မှတွေ့မည်မဟူတ်ပါ။ဘက်လိုက်လင်းချိန် 23 volt ရှိပြီး၊ဘက်လိုက်မှိန်ချိန်တွင် 3.3 volt သည်စက်သား၏ကောင်းမွန်သောအခြေအနေပင်ဖြစ်ပါသည်။
နံပါတ် ၃ ဒိုင်အုတ်၏လမ်းသည် A(+)ဖြစ်ပါကြောင်း LCD သို့ jumperလုပ်လိုသူများအတွက်ဖေါ်ပြလိုက်ရ
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/03/2014 09:13:00 am
zaw thant5August 2015 at 03:40
meater နဲ့ ဘယ်​လို ​ထောက်​တယ်​ .မီတာကို ဘယ်​​နေရာမှာ လှည့်​ထားပြီး တိုင်းရမယ်​ဆိုတဲ့ အ​ခြေခံ​လေးကို ပုံနှင့်​တကွ တင်​​ပေး​စေလိုပါတယ်​. ခုမှစပြီး​လေ့လာဆဲမို့ပါ.
zaw thant5August 2015 at 03:41
ဒီထက်​မက ​အောင်​မြင်​မှု ရပါ​စေ​နော်​
အောင်စိုး လတ် 18 January 2016 at 09:58
Y535 Connector ဖြတ်တ်ာခဲ့ကျွှတ်လိုပုံနဲပတ်လမ်းပြောပေးပါလားဆရာ
အောင်စိုး လတ် 21 January 2016 at 00:04
mgpyuelove mgpyuelove5June 2016 at 22:09
spa spa 10 September 2016 at 02:00
511 vol ပြတယ် black light ဖြစ်နေတုန်းပဲ
linn latt 27 December 2016 at 21:33
Lua u22ကback lightမရလို့ ကူညီပါလားဆရာ
Mobi Mobile Service 28 January 2017 at 22:23
Mobi Mobile Service 28 January 2017 at 22:24
Unknown 25 November 2017 at 23:24
myominkyaw 12 March 2018 at 07:40
ဆရာ C8825 sim ​မဖတ်​လို့ sim way ​လေးအလင်းပြ​ပေး​စေလိုပါတယ်